Velọ ọrụ na - ebufe - China Conveyor Manufacturers and Suppliers
onye na-ebu eriri
Igwe anaghị agba nchara cone ala
Principlekpụrụ na-arụ ọrụ nke igwe telescopic na-enweghị ike: ihe ntanetị nke telescopic na onye na-ebu ụgbọ ala ndị na-ebu ihe ndị na-aga n'ihu na-eji eriri na-agbanwe agbanwe dị ka ihe na-ebu na traction nke na-ebufe ihe site na mmegharị nke eriri ebu. Tụnyere nkịtị ala ebu, ọ na-agbakwunye belt nchekwa ngwaọrụ, belt asọfe ngwaọrụ na ndị ọzọ na usoro. Mgbe ụgbọ ala esemokwu na-aga na ọdụ ọdụ, eriri ahụ na-abanye bel ...
O eriri ebu
Onye na-ebu Raceway kwesịrị ekwesị maka ibugharị igbe niile, akpa, pallets na ngwongwo ndị ọzọ. A ga-etinye nnukwu ihe, obere ihe ma ọ bụ ihe na-adịghị agbanwe agbanwe na pallets ma ọ bụ na igbe ntụgharị. Ọ nwere ike ibufe otu mpempe ihe dị arọ ma ọ bụ buru nnukwu ibu mmetụta. Ọ dị mfe ijikọ na iyo ahịrị ahịrị. Ọ nwere ike na-etolite a mgbagwoju lọjistik njem usoro na otutu drum ahịrị na ndị ọzọ na conveyors ma ọ bụ pụrụ iche igwe izute dị iche iche usoro chọrọ. The stacking ala ...
Ntupu belt ebu
Professional n'ichepụta nke erute ígwè, ntupu belt ebu, ndoli. Ebu belt na-eweli ebu belt n'ụdị PVC ebu belt, metal ntupu belt, yinye efere belt, ogologo iga na-eweli nwere ike ịbụ, mbuli anyị na-akpọ arịgo ebu, nke mere na ebu ebu agbakwunye na-eweli nkebi na n'akụkụ baffle iji gbochie nsị n'akụkụ na ịpịgharị. Structuredị ihe owuwu a gụnyere: na-ebugharị na-ebugharị, na-ebugharị ịrị elu, wdg.
Uru nke ịrị igwe na-ebu ihe: 1. Ọnụ ala, ntinye ngwa ngwa na ndozi, usoro dị mfe, nnukwu nnyefe ọsọ na nkwụsi ike. Feedinggba ọsọ ngwa ngwa na-ebu eriri, na-ebugharị mkpanaka na ibudata ihe nchebe belt, 2. Stkwụ na-ebugharị, ọ dịghị njikọ dị n'etiti ihe na eriri ebu, nwere ike izere mmebi nke onye ebu; jiri ya tụnyere ndị ọzọ na-ebugharị, mkpọtụ ahụ pere mpe, dabara adaba maka ịrụ ọrụ gburugburu ebe a chọrọ. Obere wiil bụ siri ike roba wiil ...
Curve eriri ebu
Curved belt ebu bụ ụdị erute akụrụngwa na nnukwu erute ikike, ala ọrụ na-eri na mbara ngwa nso. Dịka usoro nkwado ya, e nwere ụdị abụọ: ụdị edozi na ụdị mkpanaka; dị ka ihe ndị na-ebugharị, e nwere eriri, eriri plastik na eriri ígwè. Ọnọdụ gburugburu ebe obibi na-ebugharị nke onye na-ebugharị ihe na - adịkarị n'etiti - 10 ℃ na + 40 ℃, na ihe ọkụkụ agaghị agabiga 70 ℃; okpomọkụ na-eguzogide roba ike ibufe hi ...
Onye na-ebugharị njem nwere ike izute ihe achọrọ maka njem otu ahịhịa nke ịdepụta ihe ọverageụverageụ, njuputa, nhicha na akụrụngwa ndị ọzọ, yana nwekwara ike ịme otu ahịrị n'ime ahịrị dị iche iche ma jiri nwayọ na-aga ije, iji mepụta ikike nchekwa ma zute ihe achọrọ maka nri nri nke sterilizer, ikpo okwu nchekwa karama na igwe karama igwe. Anyị nwere ike ime ka isi na ọdụ nke onye na - ebu ihe abụọ na - agwakọta agwakọta agwakọta, nke mere na karama ahụ (nwere ike) ahụ nọ n'ọnọdụ siri ike Ọ nwere ike igboju nrụgide a ...
Onye na-ebufe efere yinye bụ itinye ihe ndị efere n'etiti agbụ ndị dị n'akụkụ abụọ nke onye na-ebufe ihe na-eme ka a na-ebufe ihe, ka ị wee ibufe ihe na-adịghị mma. A na-etinye ihe ndozi pụrụ iche na efere yinye. Dika ihe a choro nke ulo oru mmeputa, enwere ike iji ya dika usoro nzuko, ma nwee ike imata uzo na-ezite. Main oru parameters nke yinye ebu: 1. Chain pitch: Standard ebu yinye 2. Obosara nke efere yinye: 200-1200mm 3. erute ọsọ: 0.5m / min-15m / min 4. Conveyi ...
Brand iwebata The ụlọ ọrụ specializes na mmepụta nke ulo oru ebu, akpaka nzukọ akara, belt ebu, yinye efere ebu, ike ala akara, na-abụghị ike ala akara, nkwusioru akara, ọsọ yinye mmepụta akara, oké yinye efere mmepụta akara, nkwụnye na akara , ihe na-aga were were n'ọnụ, akara nka, na ngwa ndị ọzọ na-abụghị nke ọkọlọtọ. ngwaahịa nkọwa Nka na ụzụ kwa nke o-belt ala ebu Motor parameters: e mere dị erute ibu, erute ọsọ ma ọ bụ ahịa dema ...